Egwuregwu na egwuregwu na Egypt oge ochie | Njem zuru oke
N’ọdịbendị ochie dị na Mediterenian, ihe omume metụtara egwuregwu na ememe okpukpe. Otú ọ dị, echiche nke egwuregwu n’Ijipt oge ochie dị nnọọ iche na nke dị ugbu a.
N’ezie, ụfọdụ ndị na-eme nchọpụta kwuru na ha na-emega ahụ́ nakwa na ha anaghị eme egwuregwu n’ihi na ha enweghịdị okwu ha ga-eji kwuo ihe a. Yabụ kedu egwuregwu dị n'Ijipt oge ochie?
1 Kedu egwuregwu bụ n'Ijipt oge ochie?
2 Nye gbara egwuregwu n’Ijipt oge ochie?
3 Womenmụ nwanyị ha na-egwu egwuregwu?
4 E weere egwuregwu dị ka ihe nkiri n'Ijipt oge ochie?
5 Gịnị bụ ememme Fero?
6 Enwere Fero nke pụtara dị ka onye egwuregwu?
7 Kè dị a theaa ka Osimiri Naịl rụrụ maka egwuregwu n’Ijipt?
8 God nwere chi metụtara egwuregwu na akụkọ ifo ndị Ijipt?
Kedu egwuregwu bụ n'Ijipt oge ochie?
Ọnọdụ ihu igwe dị mma maka iji ọtụtụ ụbọchị eme ihe n'èzí ma nke ahụ megidere omume mmega ahụ, mana na-enweghị echiche nke ịbụ egwuregwu dị ka a tụụrụ ya ugbu a. Otú ọ dị, ha maara nke ọma mmekọrịta dị n'etiti mmega ahụ́ na ụda olu ọma.
Isi, Egwuregwu n'Ijipt oge ochie nwere egwuregwu n'èzí na mgba ndị agha na ọzụzụ ọgụ. N’ebe ụfọdụ mgbe ochie, a hụrụ ili nwere onyogho na-egosi nka karape na judo. A chọpụtakwara ihe osise na ili Jeruef ebe ọtụtụ mmadụ pụtara na ọgụ dị ka a ga-asị na ọ bụ ọkpọ.
Egwuregwu ọzọ n’Ijipt oge ochie nke a na-emebu bụ egwuregwu. Ọ bụ obere agbụrụ site n'otu ebe ruo na nke ọzọ iji hụ onye na-agba ọsọ ọsọ. N'ịbụ ndị nọ n'èzí ruo ogologo oge, ịgba ọsọ ma ọ bụ igwu mmiri bụ ọrụ ndị nkịtị maka ha.
Omume egwuregwu ọzọ nke agwa oge ụfọdụ ndị Ijipt na-eme bụ ịchụ nta hippos, ọdụm ma ọ bụ enyí. E nwere akụkọ na-ekwu na Fero Amenhotep nke Atọ bịara ịchụ nta ehi 90 n'otu ụbọchị nakwa na Amenhotep nke Abụọ nwere ike idupu ọta ọla kọpa site na iji otu akụ ahụ gbaa akụ ise. Banyere ndị mmadụ, ha chọkwara nta ma ọ bụ obere egwuregwu dịka ịchụ nta ọbọgwụ n'osimiri ahụ.
Ndị Ijipt na-ahazikwa ụgbọ ịnyịnya na asọmpi ịgba ụta, nke bụ egwuregwu kachasị mma n'oge ahụ.
Nye gbara egwuregwu n’Ijipt oge ochie?
Ọtụtụ puku afọ gara aga, ịdị ogologo ndụ adịteghị aka na Egypt ọ gafereghị afọ 40. Ọ bụ ya mere ndị na-eme egwuregwu ji na-eto eto ma na-emega ahụ́.
Womenmụ nwanyị ha na-egwu egwuregwu?
Agbanyeghi na inwere ike iche, womenmụ nwanyị Ijipt oge ochie na-egwu egwuregwu ma ha abughi ihe omume metutara igba oso, ike ma obu mmiri kama ha bu maka ihe mmebi, mmeko na ogba egwu. Nke ahụ bụ, ụmụ nwanyị gbara ọkpụrụkpụ na oriri na nzuzo na ememme okpukpe dị ka ndị na-agba egwu na egwuregwu. Taa, anyị nwere ike ikwu na ndị inyom a mere ihe yiri nke egwuregwu mmega ahụ.
E weere egwuregwu dị ka ihe nkiri n'Ijipt oge ochie?
N'adịghị ka ndị ọzọ dị ka ndị Rom ma ọ bụ ndị Greek, n’Ijipt egwuregwu a tụghị ime dị ka ihe ngosi. Site na ihe onyonyo na ihe nnọchianya nke achọtara na ihe ochie, enweghị ike ịchọta ntụnye aka nke nnukwu ebe ma ọ bụ ọnọdụ ndị metụtara nnukwu egwuregwu egwuregwu.
Nke a pụtara na n'Ijipt oge ochie enweghị ihe dịka egwuregwu Olympic mana kama Ndị Egypt sọ mpi na nzuzo ma mee ya naanị maka ọ funụ. E nweghịdị ndị na-ege ntị.
Agbanyeghị, site na mwepu, enwere mmemme nke ndị Fero na-eme na nke nwere ike ịbụ ihe metụtara egwuregwu. Emere emume a mgbe ndị eze chịrị afọ iri atọ, yabụ na ọ bụ mmemme a na-adịghị ahụkebe n'ihi afọ ndụ ndị mmadụ na-adịkarị ala n'oge ahụ.
Gịnị bụ ememme Fero?
N'ime emume ncheta afọ a nke afọ iri atọ nke ọchịchị Fero, eze ahụ ga-aga ogige ogige n'otu ụdị agbụrụ nke ebumnuche ya bụ iji gosi ndị ya na ọ ka dị obere ma nwee ume zuru oke iji gaa n'ihu na-achị obodo.
Ememme mbụ nke ụdị ya bụ nke a na-eme mgbe afọ 30 chịchara na afọ atọ ọ bụla mgbe nke ahụ gasịrị. Dịka ọmụmaatụ, a na-ekwu na fero Ramses nke Abụọ nwụrụ ihe karịrị afọ iri itoolu, ya mere ọ ga-enwe oge buru ibu iji mee ememme dị iche iche, na-abụ onye ọzọ n'ime oge ahụ.
Enwere Fero nke pụtara dị ka onye egwuregwu?
Fero Ramses nke Abụọ dị ogologo ndụ ma sonye n'ọtụtụ ememme-ụbọchị ncheta mana ọ bụ Amenhotep II bụ onye e lere anya na ụdị nke ụdị onye egwuregwu na-eme egwuregwu, site na ịchọ mma ma ọ bụ n'ụzọ nkịtị.
Kè dị a theaa ka Osimiri Naịl rụrụ maka egwuregwu n’Ijipt?
Osimiri Naịl bụ nnukwu okporo ụzọ dị n’obodo ahụ n’oge ahụ, bụ́ ebe a na-esi ebupụ ngwongwo ndị mmadụ na-esikwa eme njem. Maka nke a, eji ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri mee njem, yabụ ndị Ijipt dị mma na ọzụzụ a.
Ọ bụ ya mere na Naịl ha nwere ike ịhazi asọmpi nzuzo nke onwe, ma ọ bụ iji ụgbọ mmiri ma ọ bụ igwu mmiri, mana ha abụghị asọmpi n'ihu ọha ebe enyere onye mmeri.
Banyere ịkụ azụ, e debere akwụkwọ na-egosi nke ahụ Na Naịl, e nwekwara ụfọdụ asọmpi nke ọdịdị onwe iji hụ onye nwere ike ijide ọtụtụ..
God nwere chi metụtara egwuregwu na akụkọ ifo ndị Ijipt?
N'Ijipt oge ochie, e nwere chi maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile nke ndụ mana ọ masịrị abụghị maka egwuregwu n'ihi na, dịka m kwuru na mbụ, n'oge ahụ, a tụghị ime egwuregwu dịka anyị na-eme taa.
Otú ọ dị, ndị Ijipt ma ọ bụrụ na ha na-efe chi n'ụdị anụmanụ maka àgwà ndị e nyere ha. Nke ahụ bụ, chi ndị nwere ahụ nnụnụ nwere mmasị na ịdị nkọ na ikike ha nwere ife efe, ebe chi ndị nwere ọdịdị nke ehi na-eme site n'ike nke ihe ndị a nwere, dịka ọ na-eme anụmanụ ndị ọzọ dịka agụ iyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Egwuregwu na egwuregwu na Egypt oge ochie